Ogaden News Agency (ONA) – Koox Wayaane ah oo u soo boob tagay Jarmalka ayaa kuraasta lala dhacay
Koox Wayaane ah oo u soo boob tagay Jarmalka ayaa kuraasta lala dhacay
Posted by ONA Admin	/ October 25, 2013
Qofkaan ogayn iyo kii ogba, waxaa sanadihii la soo dhaafay laga urursaday dadka Itobiya ku nool ee qurbaha jooga miisaanayad xad dhaaf ah oo siyaaba kala duwan loogu magac bixiyay. Waxaan ogayn mashruucii la magac baxay Biya-xidheenka Millennium oo malaayiinta looga ururiyay dadka. Qaar maalgashi loogu sheegay oo ahaa Itobiyaanka dhaladka ah iyo kuwo qasab lagaga qaaday oo ahaa Somalida oo iyaga loo soo diray Cabdi iley.
Mashruucii noocaa ahaa oo la ogaaday khiyaanadii ka dambaysay ayay koox Wayaana ah, ileen horaa loo yidhi Dawaco meel ay macal uga baratay macaluul ugu bakhtidaaye, la soo aadeen dalka Jarmalka say uga ururiyaan shaqaalaha Itobiyaanka ah ee ka shaqaysta dalkaa waxay ku sheegeen sanadaadka Nile (Nile Bonds) oy dhaheen dawladda ayaa damaanad qaadaysa. Waxay ku dhamaatay in kuraasta lala dhaco iyagoo la leeyahay –Leebaa- Tuugo .. Tuugo.
Hadaba; Itoobiyaankii dhaladka ahaa halkaa ayay la mareen tuugadii u soo boob tagtay. Waxaase aan la garanaynin waxay ka yeeli doonaan kuwa Somalida ah ee doonaya in laga iibiyo Itobiyanimada iyo kuwa lagu qasbayo ee kolba mashruuc loo soo alifay loogu keenayo qurbaha.